Vonjy taitra any Korea Avaratra: nitatitra ny tranga COVID19 ny DPRK
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vonjy taitra any Korea Avaratra: nitatitra ny tranga COVID19 ny DPRK
Jolay 26, 2020
Niaiky i Korea Avaratra fa ny “fandosirana” niverina dia nanaporofo ny zava-bitan'ny Covid-19 tao an-tanànan'i Kaesong, izay mitady hamantatra ireo fifandraisana tao anatin'ny dimy andro lasa. Ity no fotoana voalohany nanambaran'ny DPRK trangana virus.
Korea avaratra hatreto dia iray amin'ireo firenena vitsivitsy izay nitatitra fa “tsy nisy tranga” nahitana COVID-19, ary ny mpitarika ny herinandro lasa teo Kim Jong Un dia nanambara ny “fahombiazan'ny famirapiratan'ny governemanta” amin'ny fiatrehana ny areti-mandringana. Nanidy ny sisintaniny ho an'ny mpitsidika vahiny rehetra ny firenena tamin'ny faran'ny volana Janoary, toy ny nataony fony izy niatrika ny valanaretina Ebola tany Afrika Andrefana ny taona 2014 ka hatramin'ny 2015.
Tsy dia fantatra loatra ny fomba fitantanana ny rafi-pitsaboana any Korea Avaratra, fa ny fahaizany miseho amin'ny fandosirana ny COVID-19 no mahatonga azy ho mendrika handavaka lalindalina kokoa amin'ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka.
Amnesty International dia niresaka tamin'ny mpitsabo aretin-tsaina roa Koreana Tavaratra izay monina sy miasa any Korea Atsimo ankehitriny. * Kim dia mpitsabo amin'ny fitsaboana Koreana, raha i Lee kosa dia mpivarotra fanafody. Samy mino ireo vehivavy roa fa manana “tsimatimanota” amin'ny valanaretina i Korea Avaratra, saingy misy ihany koa ireo antony mahatonga ny rafitry ny fitsaboana ara-pahasalamana ao amin'ny firenena ho marefo indrindra.
Ny “fiarovana” an'i Korea Avaratra avy any COVID-19
“Satria nijaly i Korea Avaratra tamin'ny valan'aretina tsy miato, nanangana 'tsimatimanota' hanohitra azy ireo ny olona ary afaka miatrika azy ireo tsy misy tahotra lehibe. Mitovy amin'ny COVID-19 io, "hoy i Lee.
"Tsy hoe tsy voaro amin'ny biolojika izy ireo, fa ny taona maro nisian'ny valanaretina dia nahatonga azy ireo tsy hihaino."
Notanisainy ny fipoaky ny hodi-kazo sy kitrotro tamin'ny 1989, ary ny fiverimberenan'ny kôlerà, typhoid, paratyphoid ary typhus hatramin'ny taona 1994. Taorian'ny taona 2000, nandrahona an'i Korea Avaratra koa ny SARS, Ebola, gropy avian ary MERS.
Saingy, ny zava-misy fa tsy nisy tranga COVID-19 na notaterina tamin'ny tontolo ivelany dia mety ho nifandray tamin'ny fanaraha-maso sy ny faneriterena mahery vaika amin'ny fahalalahana maneho hevitra eo am-pelatanan'ny tompon'andraikitra.
“Fantatry ny Koreana Tavaratra tsara fa rehefa mifampiresaka amin'ny fianakaviana na namana mipetraka any Korea atsimo dia misy foana ny fahafaha-mahazo finday azy ireo. Ka antso an-tariby sy taratasy matetika no atao ao ambanin'ilay toerana misy olona mety mihaino na mamaky ny resak'izy ireo. Tsy hiteny na oviana na oviana mifandraika amin'ny COVID-19 mihitsy ry zareo, satria mety hahafaty azy ireo izany, "hoy i Lee.
Fiantohana fahadiovana sy fikarakarana sahaza ho an'ny rehetra
Ny krizy ara-tsakafo any Korea Avaratra tamin'ny taona 1990, fantatra amin'ny anarana hoe March Arduous, dia niteraka fiovana lehibe teo amin'ny rafi-pahasalamany.
Araka ny fanazavan'i Lee, "Talohan'ny Diabe Mafy, dia nanokana ny asany ireo mpitsabo. Tahaka izay lazain'ny teny filamatra hoe: 'Ny fanaintainan'ny marary no fanaintainako' ', raiso toy ny fianakaviana ny marary.' Saingy noho ny krizy ara-toekarena dia nijanona tsy nanome karama na sara ny fanjakana, ary ny fahavelomana no lasa asa maika indrindra. Ireo mpitsabo matihanina dia tsy maintsy nino ny zava-misy ary nariana ireo rafitra tsara rehetra ireo. ”
Ny valin'ireo fanovana ireo dia rafitra ara-pahasalamana mifototra amin'ny fandoavam-bola misy eo akaikin'ny serivisy fahasalamana "maimaimpoana". Raha ny filazan'i Lee dia nanokatra fivarotam-panafody ivelan'ny hopitaly ny fanjakana ary nahatonga ny olona hividy zava-mahadomelina tamina vola.
Betsaka ny olona no mbola tsy mankafy ny fari-piainana sahaza azy, izay mandrakotra ny faritra toy ny sakafo, rano, fidiovana, trano ary fikarakarana ara-pahasalamana. Saingy ny kilasy antonony mivoatra dia nanomboka nanova ny fomba nanokanana ireo loharanom-pahasalamana tsy dia fahita firy, ary vao mainka nanasarotra ny fidiran'ny vondrom-piarahamonina mahantra kokoa ny fikarakarana ara-pahasalamana sahaza.
“Mbola misy fitsaboana maimaimpoana, ara-dalàna, ka tsy dia andoavan'ny hopitaly vola firy izany. Saingy nisy olona sasany vao haingana nanjary vonona ny handoa vola mba hikarakarana tsara kokoa ”, hoy i Kim. “Any Korea Atsimo, raha mbola mandoa ianao dia mifidy ny hopitaly sy ny fomba fitsaboana. Fa any amin'ny Avaratra dia tsy manana izany safidy izany ianao. 'Any amin'ny distrika A ianao no mipetraka, ka mankany amin'ny hopitaly B ianao', dia misy izany. Amin'izao fotoana izao, ny olona maniry ny ho any amin'ny hopitaly izay nofidiany ary hahita dokotera tadiaviny, na dia amin'ny sarany lafo aza.
“Taloha dia tsy maintsy nikarakara ireo marary ao amin'ny faritra nanendrena azy fotsiny ny dokotera. Na inona na inona isan'ny marary dia nahazo karama tsy tapaka avy tany amin'ny hopitaly izy ireo, noho izany dia tsy nilaina ny nanokana tena. Izao dia mitondra vola ireo marary, ary manova ny antony manosika ireo mpitsabo ara-pahasalamana izany. ”
Ny Koreana Tavaratra, toy ny olon-drehetra, dia manan-jo hanana fitsaboana ambony indrindra. Na dia tsy midika akory izany fa tsy maintsy maimaim-poana ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny fisongadinan'ireo fandoavam-bola tsy voafehy ireo dia mitaky ny fametahana raha toa ka mijanona ho takatry ny rehetra ny fitsaboana ara-pahasalamana na tsia.
Ny vondrona iraisam-pirenena sy ny zon'ny fahasalamana any Korea Avaratra
Lee sy Kim dia mino fa ny fiofanana ara-pitsaboana any Korea Avaratra dia manana fari-pahaizana avo lenta ary ny matihanina amin'ny fitsaboana dia manolo-tena ho an'ireo mararin'izy ireo, saingy ny tavoahangy iray lehibe dia ny tsy fahampian'ny fitaovana hitazomana ny rafitra, ampahany noho ny sazy napetraky ny vondrona iraisam-pirenena .
“Ity fanohanana mahaolona ity dia tonga ary miankina amin'ny politika eo amin'ny samy Koreana. Manantena manokana aho fa misy ny fanohanana tsy tapaka avy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena, ohatra amin'ny fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana tioberkilaozy, na inona na inona toe-javatra politika, "hoy i Kim. "Ireo akora ilaina be dia be dia azo amin'ny alàlan'ny fanafarana entana, fa ny ankamaroan'izy ireo dia ao amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny lisitr'ireo sazy amerikana."
Manaiky i Lee: “Tsy mihodina intsony ireo fotodrafitrasa satria tsy ampy ny akora toy ny lasantsy ho an'ny herinaratra sy ny akora famokarana zava-mahadomelina. Resaka fitaovana fotsiny io. Raha ampy ny famatsian'ireto fitaovana ireto dia antenaiko fa i Korea Avaratra dia ho afaka hamaha ny olan'ny fahasalamam-bahoaka samirery. ”
Ny fianankaviambe iraisam-pirenena noho izany dia manana lesona hianarana amin'ny fiantohana ny zon'ny fahasalaman'ny olona any Korea Avaratra, amin'ny lafiny fanaovana ny fidirana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny olona rehetra eo amin'ny fiarahamonina.
Ny sazy ara-toekarena dia tsy tokony ampiharina amin'ny fomba mety hanimba ny zon'ny Koreana Avaratra, ary tokony hapetraka ny fandaminana mba hanomezana fanafody ilaina sy zavatra hafa mifandraika amin'ny fahasalamana ho an'ny olona mila izany. Ny fameperana ireo entana ireo dia tsy tokony hampiasaina amin'ny fitaovan'ny tsindry politika sy toekarena mihitsy.
Ilaina ihany koa ny fiaraha-miasa iraisampirenena amin'ny sakafo, rano ary fidiovana mba hiantohana fa vonona i Korea Avaratra hiady amin'ny valanaretina amin'ny ho avy toa ny COVID-19. Ny valanaretina toy izany dia mety vokatry ny aretina mifandraika amin'ny sakafo tsy madio sy rano, ary mety hisy vokany mora kokoa amin'ny olona izay efa tratry ny tsy fanjarian-tsakafo.
Ny governemanta Koreana Tavaratra, etsy ankilany, dia manana andraikitra hiantoka fa ny entana natokana ho an'ny asa maha-olona dia ampiasaina amin'ny tanjona kendreny maimaimpoana fa tsy avily lalana ho an'ny tombontsoany manokana. Ny manampahefana dia tsy maintsy miara-miasa tanteraka amin'ireo mpamatsy fanampiana maha-olona, ​​manome azy ireo ny zon'ny fidirana amin'ny tranonkala rehetra misy ny asa fanampiana olona, ​​noho izany dia azo hamarinina fa ny fanampiana dia tonga hatrany amin'ireo olona tena mila izany.
* Mba hiarovana ny mombamomba ireo olona ireo dia ny anarana farany ihany no ampahafantaranay azy ireo.
Nizotra tamin'ny fifohazana tamin'ny sidina Iraisam-pirenena ny fizahantany any Afrika Atsinanana
Ary ny quarantine amin'ny bungalow any ambanivohitra any Maldives?